Nkwupụta Nzuzo - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Gị na akara AKF nke AKF Medical Technology Co., Ltd. (ebe a na-akpọ "AKF"), enwere ike ịgwa gị ka ị nye ụfọdụ ozi nkeonwe. Enwere ike ịkekọrịta ozi nkeonwe a site n'aka AKF dị ka iwu nzuzo a si dị. Enwere ike ijikọ ozi nkeonwe ya na ozi ndị ọzọ ma jiri ya iji melite ngwaahịa, mmemme ma ọ bụ ọrụ anyị, wdg.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ụdị ozi nkeonwe AKF nwere ike ịnakọta yana otu anyị nwere ike isi jiri ya.
Dịka iwu si kwuo, anyị ga-anakọta, jiri, debe ma gosipụta ozi nkeonwe gị n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ. Usoro ndị a na-akọwa otu anyị si anakọta, jiri, chekwaa ma gosipụta ozi nkeonwe gị.
1 Nchịkọta nke ozi nkeonwe
1.1 information Ozi nkeonwe ndị a nke anyị na-eji, chekwaa, ma gosipụta iji nye gị ọrụ site na ịmepụta akaụntụ, ịmata ndị ọrụ, ịza ajụjụ na ozi ịntanetị.
Mgbe ị mepụtara akaụntụ nke ebe nrụọrụ weebụ AKF, zụta ma ọ bụ debanye aha ngwaahịa AKF gị, budata akụrụngwa AKF na mmelite ya, debanye aha na ụlọ ahịa AKF mobile ma ọ bụ soro na mmekọrịta ndị ọzọ na ụlọ ọrụ AKF, anyị ga-arịọ gị ka ịnye ozi nkeonwe, gụnyere mana ejedebeghi na aha gi, akara ekwenti gi, adreesị ozi-e, wdg.
Anyị nwere ike ikpokọta ozi ị nyefere site na akaụntụ nke gị na ọrụ AKF ndị ọzọ ma ọ bụ ozi ndị ọzọ iji nye gị ahụmịhe ka mma ma melite ogo ọrụ anyị.
Ọ bụrụ n ’dejupụtara ozi nkeonwe gị n’elu ebe ndị ọzọ a na-emepe emepe, a pụrụ ịgwa ndị ọrụ ndị ọzọ banyere ozi gị.
1.2 、 sava anyị (nke ndị ọzọ nyere) nwere ike ịnakọta ozi gbasara ngwaọrụ nkwukọrịta mkpanaka gị, dịka ma ọnweghị oke ihe nlereanya, NJ ngwaọrụ, adresị intaneti, oge na ọnọdụ nke ọbịbịa gị, ngwugwu ngwugwu, onye na-ezipụ na onye natara ozi. (mana ọ bụghị ozi ahụ n'onwe ya), yana ozi ndị ọzọ edere edekọ nwere njirimara ndị yiri ya iji kwado gị ịchọgharị ebe nrụọrụ weebụ AKF ma jiri ngwaahịa AKF.
Anyị ga-eji kuki na data igodo dịka ndị na-achọ ihe enyemaka (URLs) iji kpokọta oge na ụbọchị ịnweta gị, chọọ ma lelee ozi, wdg.
2 、 Ozi nkeonwe n'iji
2.1 、 AKF ga-agbaso ọdịnaya dị na Nzuzo Nzuzo a ma gwa gị oge mgbe emelitere iwu nzuzo a. Ozi nkeonwe gị ga-eji naanị maka ebumnuche n'oge nchịkọta. Ọ bụrụ na ọ nwere nzube ọzọ, anyị ga-ajụ nkwenye gị tupu oge eruo
2.2 information A ga-eji ozi nkeonwe anyị anakọtara iji melite ọrụ anyị, ngwaahịa na ọdịnaya dị mkpa, na ọkwa a ga-ezitere gị na oge mbụ mgbe emelitere AKF ngwaahịa, mmemme ma ọ bụ ọrụ. Nwere ikike ịhọrọ ịghara ịnata ọkwa dị otú ahụ n'ụzọ akọwapụtara.
3 Ngosipụta nke ozi onwe onye
3.1 、 Ewezuga nkwupụta ngosi a kapịrị ọnụ akọwapụtara na iwu nzuzo a, anyị ga-edebe ozi nkeonwe gị nke ọma ma Agaghị egosiputa ndepụta ozi ndị ahịa.
3.2 、 here na-enye anyị ikike igosipụta ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ na-enweghị nkwenye gị n'ọnọdụ ndị a:
3.2.1 、 Ọ bụrụ na anyị ekpughere ozi a maka nzube nke ofchọpụta, ịkpọtụrụ ma ọ bụ weta ikpe megide omume ọ bụla nwere ike imebi ikike anyị ma ọ bụ ihe onwunwe anyị, ndị ọrụ webụsaịtị ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ (gụnyere ikike na ihe onye ọzọ).
3.2.2 、 Anyị na-enye ndị enyemaka anyị, ndị mmekọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ tụkwasịrị obi ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu ịhazi ozi nkeonwe na nnọchite ụlọ ọrụ anyị.
Anyị chọrọ ka ndị otu dị n'elu kwenye ịhazi ụdị ozi a dịka usoro anyị si dị, Iwu Nzuzo a na nzuzo na nzuzo ọ bụla ọzọ.
3.2.3 、 Maka nyocha nke iwu.
3.2.4 、 Ngosipụta dị otú ahụ dị mkpa maka akwụkwọ mkpesa ma ọ bụ akwụkwọ edemede ọzọ nke iwu nyere ma ọ bụ iji jeere anyị ozi.
4 、 Nchedo
4.1 、 Maka anyị, nchekwa nke ozi nkeonwe dị ezigbo mkpa. Anyị ga-eme mgbalị azụmaahịa ezi uche dị na ya iji hụ na nchekwa nke ozi nkeonwe gị ma mejuputa usoro azụmahịa iji nwee ike igbochi ohere na-enweghị ikike, iji ma ọ bụ igosipụta ozi nkeonwe gị. N'agbanyeghị usoro ndị a dị n'elu, ị kwesịrị ịmara na AKF enweghị ike izere ihe egwu dị egwu metụtara ozi nkeonwe
4.2 、 I kwesiri inyere anyi aka ichedo ozi nkeonwe gi. Iji maa atụ, ekpughela okwuntughe nkeonwe gị. Mgbe ịmechara nchọgharị na ebe nrụọrụ weebụ AKF, biko pụọ na akaụntụ gị.
4.3 、 Mgbe ị jiri ụfọdụ ngwaahịa, mmemme ma ọ bụ ọrụ AKF ma ọ bụ biputere na ntanetị mmekọrịta dị ka AKF forums, ndị ọrụ ndị ọzọ ga-agụ ma ọ bụ jiri ozi nkeonwe ị nyere. Ọ bụrụ na ị nyefee ozi nkeonwe gị n'ọnọdụ ndị a dị n'elu, ị ga-ahụ maka nsogbu ọ bụla.
5 websites weebụsaịtị na ọrụ ndị ọzọ
Ngwaahịa, mmemme na ọrụ AKF nwere ike ịnwe njikọ ma ọ bụ ozi gbasara ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ. Ngwa ọrụ na ọrụ AKF nwekwara ike iji ma ọ bụ nye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ sitere na ndị ọzọ.
Ihe omuma nke ndi ozo nwetara nke nwere ike ibu ihe nzuzo gi n’okpuru iwu nzuzo nke ndi ozo. Anyị na-arịọ gị ka ị gụọ iwu nzuzo nke ndị ọzọ.
5.1 、 Mgbe ịpịrị na weebụsaịtị ndị ọzọ ejikọtara na weebụsaịtị a, ị hapụrụ na weebụsaịtị anyị wee gaa na weebụsaịtị ndị ọzọ. Ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ nwere ike ịnakọta ozi nkeonwe gị ma ọ bụ data na-enweghị aha. Ya mere, anyị enweghị ike ịchịkwa, lelee ma ọ bụ zaghachi ụdị weebụsaịtị na ọdịnaya weebụsaịtị. Anyị agaghị enwe ọrụ maka ọnwụ ọ bụla kpatara ma ọ bụ kwe omume Mee site na weebụsaịtị ndị ọzọ metụtara na weebụsaịtị a na-anakọta ozi nkeonwe ma ọ bụ data na-enweghị aha na-enweghị ikike.
5.2 、 Iwu nzuzo a anaghị emetụta nchịkọta data sitere na weebụsaịtị ndị dị na mpụga mgbe ịpịrị njikọ ahụ.
6 Nchịkọta na iji ozi gbasara ndị na-eto eto.
6.1 、 Anyị na-atụ aro ụmụntakịrị nọ n'okpuru afọ 18 ka ha gaa na ebe nrụọrụ weebụ AKF wee zụta ngwongwo site na ikike na nduzi nke onye nlekọta iwu ha.
6.2 、 ​​AKF agaghị eji ozi nkeonwe nke onye pere mpe, ma ọ bụ gosipụta ozi amata onye ọ bụla ọzọ. Onye nlekọta nwere ikike ịjụ AKF na ndị otu ya ka ha gaa n’ihu ịnakọta ozi nkeonwe nke ngalaba ahụ, ma ọ bụ rịọ AKF na ndị otu ya ka hahichapụ ozi nkeonwe nke ngalaba ahụ.
7 Mmeghari nke a amụma nzuzo.
7.1 、 Iwu nzuzo a na-enye ohere maka mgbanwe.
Enweghị nkwenye doro anya gị, anyị agaghị emebi ikike gị n'okpuru iwu nzuzo a.